Sawirro:- Booliska Somalia oo soo furtay gabar u dhalatay India iyo caruur afduub loo heystay | Arrimaha Bulshada
Home News Sawirro:- Booliska Somalia oo soo furtay gabar u dhalatay India iyo caruur afduub loo heystay
Sawirro:- Booliska Somalia oo soo furtay gabar u dhalatay India iyo caruur afduub loo heystay
Tuesday, April 02, 2019 News
Bulsha:- Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in ay soo badbaadiyaan Gabar Hindi ah iyo Saddex carruur ah oo ay dhashay oo afduub loogu heystay magaallada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraaha waddanka Hindiya Narendra Modi ayaa qayb libaax ka qaatay isagoo dadaallo uu muujiyay kula xiriiray safaaradda Hindiya ee Nairobi maadaama Hindiya aysan safaarad ku lahayn Soomaaliya, waxaana sidoo kale howlgalka fuliyay ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Gabadhan 31 jirka ah oo Muslimad ah, kana soo jeedda Hyderabad ee Hindiya ayaa waxaa lagu magacaabaa Afreen Begum, waxaana Muqdisho lagu heystay tan iyo July, 2018.
Gabadhan ayaa waxaa heystay qoyska ninka ay ubadka u dhashay oo Soomaali ah, waxaana iyada iyo carruurteedu ay maanta 2.40 pm ka duuleen Muqdisho iyagoo ka degay Addis Ababa, halkaas oo berri ay ka qaadan doonaan duulimaad ku sii jeeda Mumbai Airport.
Sida sharciga Soomaaliga uu dhigayo waalid keligii ah carruur kalama duuli karto garoonka diyaaradaha iyadoo aan ogolaansho laga haysan waalidka labaad ee ubadkaa dhalay.
Maxamed Xuseen Ducaale oo wata Baasaboor Canadian ah ayaa waxa uu Afreen ku guursaday 2013 magaallada Hyderabad, halkaasoo Maxamed uu u shaqeynayay shirkad gaar loo leeyahay.
4tii July 2018, ayaa qoyskani waxa ay go’aansadeen in ay Soomaaliya aadaan si Afreen ay u soo barato qoyska ninkeeda.
Wixii waqtigaa ka dambeeyay war waa laga waayay, illaa markii dambe ay gabar deriska ah ka qaadatay taleefoon Whatsapp leh kulana xiriirtay reerkeedii Hyderabad, iyadoo la sheegayo in tacaddiyo badan iyo jirdil loo geystay haweeneydani.
Bartamihii Febraayo 2019 gabadhan Hindida ah Aabeheed Syed Gafoor Ali oo darawal Mooto Bajaajle ka ah Hyderabad ayaa markii uu helay khabarka gabadhiisa waxa uu la xiriiray laamaha ammaanka Hindiya oo uu ka dalbaday in gabadhiisa loo soo badbaadiyo.
Howlgalku aad buu u cuslaa, dowladda Soomaaliyana lama huraan ayay noqotay in lala xiriiro oo ay kiiskaasi soo furdaamiso illaa markii dambe lagu guuleystay.
Laanta socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya ayaa misna ku dhegtay gabadha saddexda carruurta wadata maadaama aan ogolaansho laga haysan ninkii carruurtaa aabaha u ahaa illaa mar kale xukuumadda Modi ay Soomaaliya ka dalbatay in gabadhaas waraaqaha loo fududeeyo dalkeedana dib loogu soo celiyo.
W/Q Yaxye Yuusuf Khasaaro